Ụgbọ elu Russia dara n'elu ugwu na Turkey na -egbu onye ọ bụla nọ n'ụgbọ ahụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Turkey na -agbasa News » Ụgbọ elu Russia dara n'elu ugwu na Turkey na -egbu onye ọ bụla nọ n'ụgbọ ahụ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Turkey na -agbasa News • Akụkọ dị iche iche
Russia ezigala ọtụtụ ụgbọ elu mgbanyụ ọkụ na Turkey ka ha nyere mba ahụ aka n'ọgụ ya na ọkụ na -agba, nke na -eti ya ihe n'izu gara aga.
Ụgbọ elu mgbanyụ ọkụ Russia dara na Turkey taa.
O doro anya na ụgbọ elu ahụ enwelighị elu mgbe ọ tụfusịrị mmiri n'ọkụ.
Ka ọ dị ugbua, onwebeghị ozi gbasara ihe nwere ike ịkpata mberede.
Ụgbọ elu Russia na-agbanyụ ọkụ Beriev Be-200 dabara n'ime ugwu dị na mpaghara Marash nke ndịda Turkey na Satọde.
Onye ọ bụla nọ n'ụgbọ amphibious Bịa-200 ụgbọelu - ndị ọkwọ ụgbọ elu Russia na ndị ọrụ Turkey - egbuola.
Dị ka Russia si Ozi nchekwa, ndị ọrụ Russia ise na ndị ọrụ Turkey atọ nọ n'ụgbọ elu ahụ.
Ụgbọ elu ahụ dara obere oge ka ọ hapụsịrị mmiri na oke iwe Ọkụ ndị Turkey. O doro anya na ụgbọ elu ahụ enwetaghị oke elu zuru oke mgbe ọ tụfusịrị ibu ya, wee daa n'ugwu.
Ka ọ dị ugbua, onwebeghi ozi gbasara ihe nwere ike ịkpata ụgbọelu ahụ apụtala. Ndị agha Russia ezipụla otu ndị nyocha na Turkey ka ha gaa nyocha ebe ihe mberede a mere.
Ejirila ụgbọ elu ọkụ na -agbanyụ toro toro site na Russia iji nyere mba ahụ aka na mgba ya anụ ọhịa, nke na -eti ya ihe n'izu ndị na -adịbeghị anya. Dị ka akụkọ mgbasa ozi mpaghara si kwuo, Be-200 dara ada na ngalaba mgbanyụ ọkụ Adana.